Home News Degmooyinka Gobolka Banaadir oo loo dal-bay Ciidamo Xoogan si ay amniga u...
Degmooyinka Gobolka Banaadir oo loo dal-bay Ciidamo Xoogan si ay amniga u xaqiijiyaan!!
Gudoomiye ku xigeenka Arimaha Bulshada degmada Xamar Weyne ee Gobalka Banaadir ayaa waxaa uu sheegay in dhibaato badan ay ka jirto degmada, islamarkaana koox burcad ah oo taleefoonada soo dhaca ay keenaan Degmadaasi.
Maxamuud Cali Xasan Gudoomiye ku xigeenka ayaa sidoo kale waxaa ku baaqay in Ciidamo hor leh la keeno degmada, si looga hortago kooxaha dhaca ka geysta Magaalada Muqdisho, islamarkaana taleefoonada keena Degmada Xamar weyne.
Dhanka kale waxaa uu tilmaamay in arintaasi ay walaac ka muujinayeen marar badan,Magaalada Muqdisho ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka dhacayay kooxo burcad ah oo dhac u geysta Dadka Shacabka ah.
Degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa maalmahii dambe waxaa ay ahaayeen kuwa amnigoodu uu aad usii liidanaayay.
Previous articleDF oo go’aan yaab leh ku taageertay Sacuudiga xilli cadaadis uu kaga imanayo caalamka intiisa kale
Next articleWararkii Ugu Dambeeyay Dagaal ka dhacay Muqdisho!!
Taliska Cidamada Booliska Somaliland oo Ka Hadlay Dil Ka Dhacay Magaalada...
Beeraleyda Kenya Iyo Kuwa Soomaalida oo Ku Dhaw In Gacanta Ay...